Dhaqaalaha hoowlgabka oo hoos u dhacay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhaqaalaha hoowlgabka oo hoos u dhacay
Publicerat fredag 8 januari 2010 kl 12.44
Toddobaadka foodda innagu soo haya ayey heyadda qidmadda hoowlgabka ee afkan iswiidhishkana lagu yiraahdo Pensionsmyndighet ay warbixin u diri doontaa la xiriirta sidii caadaduba ahayd xaaladda dhaqaale ee dadyoowga hoowlgabka iyo kuwa maalgashada dhaqaale hoowlgab. Waraaqaha loo diri doono dadyoowgaa ayaa la saadaalinayaa in aanay ku oolin warbixinno farax geliya ee sannadka 2010. Olle Settergren, waa madaxa laanta horumarinta ee heyadda hoowlgabka.
- Dhammaan waxey dadkaasi heli doonaan dhaqaale hoowlgab oo ka liita, hase yeeshe dhammaantood ma wada heli doonaan dhaqaale ka liita hoowlgab marka cashuurta laga jaro sannadada foodda innagu soo haya.
Sannadkii ina dhaafay ee 2009, ayuu hoos u dhacay qiimaha mushtarka, kaasina oo saameeyn ku yeeshay dhaqaalihii taakuleynta ardayda iyo midka dadyoowga hoowlgabka. Iyadoona dadyoowga qaata dhaqaalaha hoowlgabka ee aasaasiga ah uu gaarsiisnaa lix kun oo koronka iswiidhishka bishii, wuxuuna dhaqaalahoodu hoos u dhacay 0,9 boqolkii waana marka loo barbardhigi sannadkii ina dhaafay ee 2008. Amuurtaa ayay sidoo kale ka siman yihiin dhaqaalaha kaalmada dhaqaale ee kirada guryaha hoowlgabka lagu kabo, waa kuwooda qaata dhaqaale ka hooseeya 10 000 oo kronka iswiidhishka ah.